नेपालगन्जको शीर झुक्न नदिने गरी काम गर्नेछु : विजयकुमार गुप्ता, उम्मेदवार बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. २ ख – Sadarline
विजयकुमार गुप्ता नेपालगन्जका चर्चित समाजसेवी व्यावसायी हुन वाणिज्य संकायमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका गुप्ता राजनीतिसँगै विभिन्न सामाजिक कार्यमा क्रियाशील रहदै आएका छन् । लामो समयदेखि नेकपा एमालेमा रहेर राजनीतिमा सक्रिय गुप्ता आसन्न चुनावमा बामगठबन्धनबाट बाँके क्षेत्र नं. २ प्रदेश सभा ‘ख’ बाट प्रतिस्पर्धामा छन् । हाल नेकपा एमाले उद्योग व्यवसाय विभागका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नं. ६ का प्रदेश संयोजक रहेका गुप्ताले आफु निर्वाचित भएपछि पारिश्रमिक नलिएर सामाजिक विकासमा खर्च गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेका गुप्तासंग हामीले ६ वटा प्रश्न गरेका थियौ यसरी दिए गुप्ताले ती प्रश्नको जवाफ :
१. चुनावको प्रचारप्रसार कसरी अघि बढेको छ ?
– यतिबेला देशैभरी वाम गठबन्धनको पक्षमा अहिले जनलहर बढेको छ । घरदैलो अभियानमा ठूलो जनसहभागिता छ । हरेक ठाउँमा जाँदा सबै समुदायका मानिसहरुले उत्साहपूर्वक साथ दिदै स्वागत गरेका छन् । एमालेलाई मधेस विरोधीको आरोप लागिरहेका बेलामा बाँकेमा प्रद्स तथा प्रतिनिधि सभामा मधेसी समुदायबाटै हामीलाई उम्मेद्वार बनाएर त्यो भ्रमलाई चिर्ने काम भएको छ । यसले समाजमा भ्रम छर्नेहरु निरुत्साहित भएका छन् । अहिले मेरो प्रचारप्रसारमा पार्टीका कार्यक्रमहरुमा नआउने सबै समुदायका ठूलाठूला व्यापारी, व्यवसायीहरुले साथ दिएका छन् । घरदैलो अभियान सकिँदा म निकै उत्साहित छु । टोलटोलमा हाम्रा निर्वाचन कमिटीहरु परिचालन भएका छन् । सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरि रहेका छन् । यसले मेरो हौसला बढाएको छ र नतिजा पनि हाम्रै पक्षमा आउने कुरमा दृढ छु ।
२. मतदाताको घरदैलोमा जाँदा कस्तो रेस्पोन्स आएको छ ?
– जनताले हृदयबाट स्वागत गरिरहेका छन् । स्थायी सरकार, विकास र सम्वृद्धिको जनतामा अपेक्षा छ । अव पनि मुलुकमा ६–६ महिनामा फेरीने सरकार र त्रीशंकु पार्लियामेन्ट, प्रदेश सभा दिएर मुलुक झनै खाडमा जान्छ भन्ने बुझेरै मतदाताको आकर्षण बाम गठबन्धन तिर देखिएको छ । साथै वाम गठबन्धनले स्थायी सरकार निर्माण गरेर विकास र संवृद्धिका बाटाहरु खुल्छन् भन्नेमा सबै जनताहरु विश्वस्त छन् । यसले हाम्रो पक्षमा जनलहरलाई थप बढाउने काम गरेको छ ।
– हामीले उठाएका एजेण्डाहरु हाम्रा प्रतिवद्धता पत्रमा पनि आइसकेका छन् । नेपालगन्ज विमानस्थललाई स्तरोन्नती गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने, नेपालगन्जलाई औद्योगिक केन्द्र बनाउने, नेपालगन्जमा विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने, भेरी अञ्चल अस्पताललाई स्तरोन्नती गरी सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने, राप्ती नदीमा स्थायी तटबन्ध गर्ने र बाढीपीडितलाई सुरक्षित वासको व्यवस्था गर्ने, नेपालगन्जलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुख्खा बन्दरगाह, चक्रपथ निर्माण लगायतका हाम्रा एजेण्डाहरु छन् । यी सबै एजेण्डाहरुको सम्बोधन गरी कार्यान्वयनका लागि मेरो उम्मेद्वारी हो ।
– एमाले गरिब तथा विपन्न वर्गको हितमा काम गर्ने पार्टी हो । म स्वयं आफैले पाउने पारिश्रमिक सामाजिक काममा खर्च गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाइसकेको छु । मैले शुन्य भ्रष्टाचारमा काम गर्नेर्छु । राजनीति लगानी गरेर पैसा कमाउने थलो होइन, विशुद्ध सामाजिक सेवा हो । मैले त्यही रुपमा लिएको छु राम्रो नागरिक भएर समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । मेरो सम्पूर्ण जीवन सामाजिक सेवामा खर्च गरि सकेको छु । मैले सामाजिक स्वार्थमा मात्रै काम गर्ने हो । अवधि, उर्दु लगायतका भाषाको सम्मान गरेर रोजगारी सिर्जनामा लाग्नेछु । मैले उद्योगी व्यवसायीको मर्का बुझेको छु, करदाता र रोजगारदाताको सम्मानका लागि पनि मेरो उम्मेद्वारी हो । जडिबुटीका कारखानाहरु खोलेर भारतमा कच्चा पदार्थ होइन, प्रशोधित पदार्थ निकासी गरिनेछ । मानिसलाई विदेशमा जान नपरोस यही रोजगारको सिर्जना गरिनेछ ।
५. तपाईका क्षेत्रका खास समस्या के के हुन, त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
६ . केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
सदरलाइनडटकम १८ मंसिर, नेपालगन्ज : बाँके प्रतिनिधि सभा–२ बाट एकिकृत राप्रपा राष्ट्रवादीका केन्द्रीय सह–प्रवक्ता तेजनारायण कँडेलले हिन्दू राष्ट्रका पक्षधरले आफुलाई भोट दिने भएकाले जित सुनिश्चित रहेको दाबी गरेका छन् । उनले यो चुनाव देशलाई हिन्दू राष्ट्रमा फर्काउन चाहने शक्ति र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कायम राख्ने शक्तिबीचको जनमत संग्रह भएको बताउदै चुनावको […]